Yaa lunsaday dhaqaalihi lagu dhisi lahaa Wadada Jeneral Daa'uud ?
Saturday February 20, 2016 - 00:34:22 in Wararka by Xarunta Dhexe
Waxaa dib u soo laba kacleeyay fadeexadii hareysay shaqsiyaad lunsaday lacag dhan 4 Milyan Dollar oo ay iska soo ururiyeen jaaliyadaha Soomaaliyeed si loogu dayactiro wadada dheer ee lagu magacaabo Jan. Daa'uud.
Waxaa dib u soo laba kacleeyay fadeexadii hareysay shaqsiyaad lunsaday lacag dhan 4 Milyan Dollar oo ay iska soo ururiyeen jaaliyadaha Soomaaliyeed si loogu dayactiro wadada dheer ee lagu magacaabo Jan. Daa’uud.
Shaqsiyaadkaan oo intooda badan ka howlgala Telefishanka Universal ayaa la sheegayaa inay tiradoodu gaareyso ilaa afar ruux oo midkood ay haween tahay, kuwaasi oo iyagu kharajkaasi gacantooda ku soo dhacday.
Mid ka mid ah weriyeyaashii warbixinta ka qoray wadada Jan. Daa’uud muddo 8-sano kahor ayaa bartiisa xiriirka bulshada wada uu uga hadlay arrintaasi, isagoona sheegay inuu socdo qorshe ay wadaan shacabka ku dhaqan degmooyinka Wardhiigkey, Boondheere iyo Yaaqshiid oo ay marto wadadaasi si loo hor geeyo cadaaladda.
"Xisaab ayaa ka dambeysa guryaha lagu dhistay iyo xisbiyada lagu furtay” ayuu yiri Weriyahaasi oo lagu magacaabo C/Nuur Kediye isla markaana horay uga tirsanaa Weriyeyaasha Telefishanka Universal.
Dhinaca kale wadada Jan. Daa’uud oo ka mid ah waddooyinka uu burburka xoogan ku dhacay, ayaa iminka u muuqata inay gebi ahaanba baaba’eyso, iyadoo boholo waaweyn ay ka sameeyeen roobabka iyo dhaawacyadii ka soo gaaray dagaalada Muqdisho.
Wararki ugu dambeeyay gabarti Meydkeeda lagu riday digsiga
01/06/2021 - 20:41:07
Ganacsadihi lagu dilay Kenya oo warar dheeri ah laga helayo
25/05/2021 - 21:07:50
18/05/2021 - 14:07:14
Dowlada Soomaaliya oo lagu eedeeyay iney lunsatay Dhaqaalo
11/05/2021 - 13:35:26
28/06/2021 - 21:43:44 | Visits: 204